Andrea Pirlo oo ku booriyay Juventus inay sameyso saxiixa xidig ka tirsan Real Madrid – Gool FM
(Yurub) 14 Maajo 2019. Halyeeyga reer Talyaani ee Andrea Pirlo ayaa ugu baaqay maamulka sare ee kooxda Juventus inay la soo wareegaan xiddiga Real Madrid Francisco Isco, kaddib marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda.
Laacibkii hore kooxda Juventus ayaa wuxuu si toos ah diirada u saaray ka hadlida boosaska ay liidato kooxda Juventus, isla markaana loo baahan in wax laga qabto xagaagan.
Andrea Pirlo ayaa wareysi uu dhawaan ku bixiyay shabakada caanka ah ee “Sky Sports” wuxuu ku sheegay:
“Juventus waxay u baahan tahay in isbedel weyn ay ku sameyso safka kooxda haddii ay doonayaan inay ku guuleystaan ​​tartanka Champions League, gaar ahaan khadka dhexe”.
“Waxaa muhiim ah in la hormariyo khadka dhexe, kaddib saxiixa Cristiano Ronaldo, ka mid noqoshadiisa kooxda wuxuu ahaa dareen aad u fiican, laakiin ma jirin qorshe dhab ah ee ku saabsan sida kubadda loo dhaqaajiyo”.
“Juventus waxay u baahan tahay ciyaaryahan khadka dhexe ee heer sare ah, kaasoo ku guuleysan kara tartanka Champions League, waxaana qabaa in Isco uu yahay midka saxda ah ee ku haboon”.
Muxuu ka yiri Del Piero suurtagalnimada uu Antonio Conte ku noqon karo tababaraha Inter Milan??